ကပ်ဆိုးကြီးကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ မိသားစု(၂)စုအပြင် မိဘမဲ့ဂေဟာကိုပါ ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံ – Suehninsi
နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံဟာ လက်ရှိ Covid-19 ကြောင့် အလုပ်နားနေရတဲ့ မိသားစု(၂)စုအပြင် HHHP မိဘမဲ့ဂေဟာကိုပါလှူဒါန်းမှုမှာ ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကို “Covidကြောင့်စက်မချုပ်ရလို့အိမ်လခမပေးနိုင်တဲ့မုဆိုးမသားအမိကို (၁)သိန်း(၃)သောင်း ပန်းရံအလုပ်နားနေရတဲ့ ဗိုက်ကြီးသည်သားအမိကို(၅)သောင်း HHHPမိဘမဲ့ဂေဟာကို(၁)သိန်း ကို
အလှူရှင်Phyo PyaeSone, YadanarOo, AsterRock တို့ကိုယ်စားလှူပေးခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်မလှူနိုင် ပေမယ့် အလှူအကျိုးဆောင် ခွင့်ရခဲ့လို့ကြည်နူးရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ PLHIV တွေ အခက်အခဲဖြစ်တိုင်းကူညီထောက်ပံ့ကြတဲ့သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ” လို့ ကိုယ်စားသွားရောက်လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ Zar Ni Aung ရဲ့လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖြိုးပြည့်စုံကတော့ အလုပ်နားနေရတဲ့ မိသားစု(၂)စုအပြင်
HHHP မိဘမဲ့ဂေဟာကိုပါလှူဒါန်းမှုမှာ ပါဝင်လှူဒါန်ဖြစ်ခဲ့ပုံလေးကို “ကိုဇာနည်အောင် ကြောင့်လှူဖြစ်တဲ့ ကာလ ဒါန ကုသိုလ်တွေက အမြဲ ပီတိ ဖြစ်စေပါတယ် အလှူခံတိုင်းလည်း ကိုယ်လှူနိုင်တဲ့ ပမာဏပဲ အလှူခံတယ်၊ ဒါဟာ သိပ်အရေးကြီးပါတယ် ၊ ကိုယ့်နိုင်ဝန် အလှူအပေါ်မှာ သဒ္ဓါ ၊ ယုံကြည်မှု နဲ့ စေတနာ အပြည့်ဝ ခံစားခွင့်ရတယ် သာဓုပါ ကုသိုလ် ကိုလည်း အမျှ အမျှ အမျှ ကိုယ်ဇာနည် လည်း
ကုသိုလ် အကျိုးတွေထပ်တူရပါစေ (P.S. အလှူလေး မများပေမဲ့ အမေတို့ ဆရာတို့ ခွဲခွာသွားတဲ့ ခုလို ချိန်တွေမှာ လှူခွင့်ရတာ ပိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်)” လိုပသူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ ဖြိုးပြည့်စုံကတော့ လှူဒါန်းလိုက်ရတဲ့အလှူလေးကိုတော့ မိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူ ဆရာဖြစ်သူတေးရေးကေအေတီတို့ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အခုလို့အချိန်မှာ လှူခွင့်ရတဲ့အတွက် လှူဒါန်းရန်လာရောက်တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးကိုယ်စားသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ကိုဇာနည်အောင်ကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့။
နိုငျငံကြျောအဆိုတျော ဖွိုးပွညျ့စုံဟာ လကျရှိ Covid-19 ကွောငျ့ အလုပျနားနရေတဲ့ မိသားစု(၂)စုအပွငျ HHHP မိဘမဲ့ဂဟောကိုပါလှူဒါနျးမှုမှာ ပါဝငျလှူဒါနျးခဲ့တဲ့အကွောငျးကို “Covidကွောငျ့စကျမခြုပျရလို့အိမျလခမပေးနိုငျတဲ့မုဆိုးမသားအမိကို (၁)သိနျး(၃)သောငျး ပနျးရံအလုပျနားနရေတဲ့ ဗိုကျကွီးသညျသားအမိကို(၅)သောငျး HHHPမိဘမဲ့ဂဟောကို(၁)သိနျး ကို
အလှူရှငျPhyo PyaeSone, YadanarOo, AsterRock တို့ကိုယျစားလှူပေးခဲ့ပါတယျ။ ကိုယျတိုငျမလှူနိုငျ ပမေယျ့ အလှူအကြိုးဆောငျ ခှငျ့ရခဲ့လို့ကွညျနူးရပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ PLHIV တှေ အခကျအခဲဖွဈတိုငျးကူညီထောကျပံ့ကွတဲ့သူငယျခငျြးမြားအားလုံးကိုကြေးဇူးပါ” လို့ ကိုယျစားသှားရောကျလှူဒါနျးပေးခဲ့တဲ့ Zar Ni Aung ရဲ့လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာမှာဖျောပွထားပါတယျ။ဖွိုးပွညျ့စုံကတော့ အလုပျနားနရေတဲ့ မိသားစု(၂)စုအပွငျ
HHHP မိဘမဲ့ဂဟောကိုပါလှူဒါနျးမှုမှာ ပါဝငျလှူဒါနျဖွဈခဲ့ပုံလေးကို “ကိုဇာနညျအောငျ ကွောငျ့လှူဖွဈတဲ့ ကာလ ဒါန ကုသိုလျတှကေ အမွဲ ပီတိ ဖွဈစပေါတယျ အလှူခံတိုငျးလညျး ကိုယျလှူနိုငျတဲ့ ပမာဏပဲ အလှူခံတယျ၊ ဒါဟာ သိပျအရေးကွီးပါတယျ ၊ ကိုယျ့နိုငျဝနျ အလှူအပျေါမှာ သဒ်ဓါ ၊ ယုံကွညျမှု နဲ့ စတေနာ အပွညျ့ဝ ခံစားခှငျ့ရတယျ သာဓုပါ ကုသိုလျ ကိုလညျး အမြှ အမြှ အမြှ ကိုယျဇာနညျ လညျး
ကုသိုလျ အကြိုးတှထေပျတူရပါစေ (P.S. အလှူလေး မမြားပမေဲ့ အမတေို့ ဆရာတို့ ခှဲခှာသှားတဲ့ ခုလို ခြိနျတှမှော လှူခှငျ့ရတာ ပိုကြေးဇူးတငျပါတယျ)” လိုပသူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာမှာဖျောပွထားပါတယျ။ ပရိသတျကွီးရေ ဖွိုးပွညျ့စုံကတော့ လှူဒါနျးလိုကျရတဲ့အလှူလေးကိုတော့ မိခငျဖွဈသူနဲ့အတူ ဆရာဖွဈသူတေးရေးကအေတေီတို့ ကှယျလှနျသှားတဲ့ အခုလို့အခြိနျမှာ လှူခှငျ့ရတဲ့အတှကျ လှူဒါနျးရနျလာရောကျတိုကျတှနျးခဲ့ပွီးကိုယျစားသှားရောကျလှူဒါနျးခဲ့တဲ့ ကိုဇာနညျအောငျကိုလညျး အထူးကြေးဇူးတငျပါတယျတဲ့။
Source : Phyo Pyae Sone’s Facebook | Reference & Credit : Cele Gabar
အိမ်ရှင်မတွေဘဝကို အိမ်အလုပ်တွေလုပ်ရင်း နားလည်လာလို့ ယူမယ့်မိန်းမအတွက် စဉ်းစားထားတဲ့ အကြောင်းလေးတွေ ပြောပြခဲ့တဲ့ ကျော်ကျော်
ယနေ့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဝါရင့်လူရွှင်တော်ကြီး ဦးပလာတာ